Iindaba-Yazisa nge-PP yokunyibilika kwengubo yelaphu
Yazisa ngelaphu le-melt elinyibilikisiweyo
Ilaphu elinyibilikisiweyo (ilaphu elinyibilikisiweyo elingalukwanga) yimveliso eyenziwe nge-index ephezulu ye-melt index ye-PP (i-polypropylene) yengubo engalukwanga. Yeyona nto iphambili kwimaski. Ububanzi be-fiber ye-spinneret inokufikelela kwi-0.001 ukuya kwi-0.005 mm. Zininzi izinto ezingasebenziyo, ezinombala omdaka, ukumelana nemibimbi, kunye nolwakhiwo olukhethekileyo lwe-capillary. Imisonto ye-Ultrafine yonyusa inani kunye nomphezulu wendawo yemicu kwiyunithi nganye, ukuze ilaphu elinyibilikayo libe nokuhluza okuhle, ukukhusela, ukufudumeza ubushushu kunye nokufunxwa kweoyile. . Ukusetyenziswa kwayo okuphambili kubandakanya ukuhluza umoya, ukuhluza ulwelo olungena-acid, ukutya okucocekileyo kokutya, ukuveliswa kwemaski yokuvelisa uthuli, njl.njl.Ukongeza, inokusetyenziswa njengemveliso zonyango kunye nococeko, ukusula ngokuchanekileyo kwemizi-mveliso, izinto zokwambathisa ubushushu, ioyile- ukufunxa izinto, izahluli zebhetri, kunye nelaphu lesikhumba lokulingisa. nezinye ezininzi. Ukusukela oko kwaqhambuka ubhubhane wesithsaba esitsha, iKomishoni yoLawulo lweeMpahla zikaRhulumente kunye neKhomishini yoLawulo yeBhunga likaRhulumente icele iinkampani ezifanelekileyo ukuba zikhawulezise ukwakhiwa kweentambo zemveliso, zibekwe kwimveliso ngokukhawuleza okukhulu, kwaye zonyuse unikezelo lwe-meltblown nonwovens Kwimarike ukubonelela ngokhuseleko ekuthinteleni nasekulawuleni ubhubhane.
Iindawo eziqhelekileyo zesicelo se-meltblown amalaphu angalukanga:
1. Ukusetyenziswa kwicandelo lokucoca umoya: kusetyenziswa izixhobo zokucoca umoya, njengesixhobo sokucoca umoya esisebenza ngokukuko, kunye nokusetyenziselwa ukuhluza umoya okurhabaxa kunye nokuphakathi kokuphakathi kunye namazinga amakhulu okuhamba. Inezibonelelo zokumelana okuphantsi, amandla aphezulu, i-asidi egqwesileyo kunye nokumelana ne-alkali, ukumelana nokubola, ukusebenza ngokuzinzileyo, ubomi benkonzo ende kunye nexabiso eliphantsi.
3. Isixhobo sokucoca ulwelo kunye n diaphragm yebhetri: Ilaphu lePolypropylene inyibilike ilaphu lisetyenziselwa ukucoca ulwelo oluneasidi kunye nealkali, ioyile, njalo njalo. Inentsebenzo entle kakhulu, ithathwa njengeyona nto ilungileyo yovalo ngumzi webhetri ekhaya nakwamanye amazwe, kwaye isetyenziswe ngokubanzi, ayinciphisi kuphela iindleko zebhetri, yenza lula inkqubo, kwaye inciphisa kakhulu ubunzima kunye nobungakanani bebhetri.
4. Izinto zokufunxa ioyile kunye nokusula kwemizi-mveliso: izinto ezahlukeneyo zokufunxa ioyile ezenziwe ngelaphu le-polypropylene meltblown, ezinokufunxa ioyile ukuya kuthi ga kwi-14-15 amaxesha abo obunzima, zisetyenziswa kakhulu kwiiprojekthi zokhuselo lokusingqongileyo kunye neeprojekthi zokwahlula amanzi ngeoyile. Ukongeza, zisetyenziswa kwimveliso zeshishini. , Inokusetyenziswa njengezinto ezicocekileyo zeoyile kunye nothuli. Ezi zicelo zinika umdlalo opheleleyo kwiimpawu zepolypropylene uqobo kunye nokuhanjiswa kwemicu ye-ultrafine eyenziwe yi-meltblown.
5. Izinto zokwambathisa i-Thermal: Ubungakanani obuqhelekileyo beentsinga ezinyibilikayo ziphakathi kwe-0.5-5μm, kwaye zenziwe ngokuthe ngqo kwilaphu elingalukwanga ngokubeka ngokungacwangciswanga. Ke ngoko, indawo engaphezulu yentsimbi ye-meltblown inkulu kwaye i-porosity iphezulu. Isixa esikhulu somoya sigcinwa kolu lwakhiwo. , Ngaba ngempumelelo ukuthintela ilahleko ubushushu, yinto ukuhluza egqwesileyo kunye nezinto usambathisa. Isetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yempahla kunye nezinto ezahlukeneyo zokugquma ubushushu. Njengeebhatyi zesikhumba, iihempe ze-ski, iimpahla ezinobungqina obubandayo, ilaphu lomqhaphu, njl., Inezibonelelo zobunzima bokukhanya, ukufudumala, ukungafuneki kokufuma, ukungena komoya okuhle, kwaye akukho busisi.